Nke a bụ 10zọ iri ị nwere ike ịbawanye njikọ aka na ọdịnaya ọdịnaya | Martech Zone
Atụmatụ dị mkpa na nhazigharị anyị na njikọta mmekọrịta anyị abụrụla elebara anya na ọdịnaya anya. Kesa ihe omuma nke oma na saiti anyi abanyela na iru anyi ma nye m ohere ikwurita ihe di n’ime ha. Ihe omuma ihe omuma a sitere na Canva adighi iche - ijeghari mmadu site na uzo di iche iche i nwere ike isi mee ka ihe omuma. Enwere m ekele maka ndụmọdụ dị mkpa ha na-enye:
Ihe eji eme ihe na enye gi ochichi n'efu iji hazie ozi gi, jiri usoro di iche na ndi ozo iji mee ka ozi gi gabiga, o bu ezigbo oru bara uru.
Ihe dị iche bụ isi ihe dị n'ịntanetị. Ka anyị na-ede edemede n’edemede, anyị kwesịrị ịrụsi ọrụ ike na iche ya na ọtụtụ puku isiokwu ndị ọzọ a na-ebipụta kwa ụbọchị na ntanetị. Tinye otu ihe ngosi anya, agbanyeghị, isiokwu a na-enwe mmetụta ọhụụ ọhụụ nye ndị ọbịa gị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, Nkesa nke edemede na-abawanye ụba.
Na ihe omuma a, Canva egosi gị 10 ofdị Ọdịnaya Visual dị egwu akara gị kwesịrị ịmepụta ugbu a:
Anya-ejide foto - 93% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ihe oyiyi bụ # 1 na-ekpebi ihe mgbe ịzụrụ ngwaahịa.
Kaadị E Si Nweta Egwu - Quotes gosipụtara ụkpụrụ gị, dị mfe ịmepụta, ma bụrụ ndị na-ekekọrịta oke.
Oku siri ike ka emee - 70% nke azụmaahịa enweghị oku ọ bụla iji rụọ ọrụ n'agbanyeghị na ndị na-ekiri nwere ike ime ihe.
Ihe oyiyi - Iji onyonyo zuru ezu na akara nwere ike inyere gị aka inweta 67% ndị ọzọ na-ege ntị.
Ihe ngosi data na-akpali mmasị - 40% nke ndị mmadụ na-anabata ma ghọta ozi ọhụụ karịa ederede doro anya.
Na-etinye vidiyo - Naanị 9% nke obere azụmaahịa na-eji ha, mana 64% nke ndị na-azụ ahịa nwere mmasị karịa ịzụta mgbe ha kirisịrị vidiyo.
Atụmatụ, aghụghọ, na otu esi eme - Na-enye uru ma jiri ngwaahịa gị ma nyere aka iwulite ikike.
Ihuenyo Nseta - 88% nke ndị mmadụ na-agụ nyocha iji chọpụta ogo azụmaahịa, were nseta ihuenyo nke nyocha gị!
Echiche Na-akpali Ajụjụ - Na-agba ume ịkekọrịta, mkparịta ụka, itinye aka na mmata aha.
Infographics - Enwere ihe kpatara ya Highbridge na-emepụta ọtụtụ infographics maka ndị ahịa anyị! Ha nwere ohere 3 ugboro karịa ka ha ga-ekerịta na azụmaahịa site na iji infographics na-akọ 12% uru karịa ndị na-adịghị.
Ngosi: Abụ m mmekọ Canva na m na-eji njikọ njikọ m na edemede a.
Tags: ihe onyonyookpukpuvidiyo na -adọrọ mmasịotú na-infographicinfographicsfotophotosajụjụkaadị ikwu okwuscreenshotsaghụghọụdị nke ọdịnaya anyavideoseserese eserese
Sep 14, 2017 na 6: 56 AM
Ihe mara mma na infographic. Ọdịnaya Visual na akwụkwọ obibi akwụkwọ na-emetụta ọtụtụ ihe iji zipu ozi azụmahịa anyị na ndị ọzọ.